Momba anay - ZNZK
ZNZK dia nandeha tany amin'ny mpamatsy trano fidiovana lehibe indrindra ao Shina. Miaraka amin'ny fametrahana 500+ eo amin'ny sehatra nasionaly, ireo injenieran'ny famolavolana ZNZK ary mpitantana ny tetikasa dia nandray anjara tamina tetik'asa maro karazana fanambin'ny tontolo iainana sy ny injeniera samihafa. Ny traikefa ananantsika dia tsy voafetra amin'ny famolavolana, ny famahana olana ary ny fikojakojana ny rafitra. Eo foana ho anao izahay hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany, hatramin'ny volavola ka hatramin'ny fiasa.
ZNZK dia manaraka ny ISO9001 sy ISO14001. ZNZK dia manome programa fiofanana arak'asa ho an'ny mpanjifa mividy sy mametraka rafitra fidiovana banga, ary koa fizahana tsindraindray mandritra ny fametrahana sy serivisy tsara aorian'ny fivarotana.